musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Kingsley Coman Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Genius iyo inonyatsozivikanwa neNickname; "Rat Tail". Our Kingsley Coman Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda zvisingazivikanwi zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekukwanisa kwake kukurumidza asi vashomanana vanofunga nezveByleyley Coman's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Kingsley Coman Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga & Vimbiso
Kingsley Coman akaberekwa musi we 13th waJune 1996 mudhipatimendi reSeine-et-Marne, Paris, France. Akaberekerwa mumukadzi mutsvuku wechiFrench uye baba vake, Christian Coman anobva kuGuadeloupe, iyo yakafanana yakabva Thierry Henry, Claude Makelele, Lilian Thuram naFrank Leboeuf. Kingsley aiva fan of Thierry Henry uyo tarenda yake yakamukurudzira kutamba nebhobho zvakanyanyisa semucheche.
Kingsley akanga atanga huduku hwake paaiva nemakore matanhatu, achibatanidza US Sénart-Moissy mu2002 asati asangana neParis Saint-Germain mu2004.
Sezvakaitwa nababa vake, "Kingsley akanga ari mwana akachema mushure mokutamba mimwe mitambo kana kutamba. Ndinoyeuka mutambo webhola muLille. Boka rake rakatora chinangwa mumasangano uye izvi zvakatungamirira ku 1-0. Pakarepo, akatanga kuchema. Little Kingsley akatora bhora muchinangwa chake, akadzosera kunzvimbo yepamusoro yekuzvipira uye akatanga chirongwa chekambani. Wechikwata chake akapfuurira bhora zvakare kwaari uye 'King' akadzinga boka rose rinopikisa rose kuti rienzane. Uyu waiva gore rake rokutanga junior pa PSG. Nhasi, kuchema haisi iyo nyaya. Paanorasikirwa nemakwikwi anokosha, musikana wake nemudzimai vanoti haatauri kune ani zvake kwezuva rimwe chete. "
Kingsley akakurira mapoka ePSG sezvaakaonekwa sediki mudiki uye akavimbisa mutambi wechidiki we PSG. Pazera re10, akanga atotamba achitamba nevane pasi pe14 pamusana pezvaaikwanisa kuita. Kingsley kamwe akatarisa zvishoma zvakasiyana mumakore ake akakura pa PSG.
Coman akaita shanduro yake yepamusoro ye PSG pa 17 February 2013. Chimiro chakaita kuti ave mutambi wechidiki pane ose mumutambo we PSG mumakore e16, mwedzi mitanhatu nemazuva mana. Coman yakaendeswa kuna Juventus muna 2014 pakapera chibvumirano chake, kukunda Serie A uye Coppa Italia munguva yake yokutanga muItaly. MunaAugust 2015, akaendesa chikwereti ku Bayern Munich, achikunda imwe kaviri munguva yake yokutanga. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Kingsley Coman Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pane chirevo icho; "Varume chaivo havakwanisi vasikana vakanaka kwazvo, vanoda musikana anogona kuita kuti nyika yavo ive yakanaka kwazvo." Kune Coman, iye ari muukama nehukanako uyo achiri kuita kuti nyika yake ive yakanaka. Mutauro wechiFrench Sephora Goignan ane mwana kwaari.
Akanaka Sephora Goignan anozivikanwa zvikuru nevezera rake nokuda kwekutsigirwa kwake kusina kufanira kumurume wake sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa. Anotarisa akanaka chaizvo uye ngirozi uye anokwanisa kuita kuti munhu ave nehotera dzakawanda mudumbu.
Sephora Goignan ane mutoro zvokuti anototora nguva yake kuita Kinsley's beadwork zvinoreva nyika kwaari.
Pasinei nerudo, vazhinji vakabvunza kuti nei Coman ichiri kushaya clueless pamusoro pemhando yemukadzi iyeye. Chokwadi chinotaurirwa. Ukama hwavo hwakashungurudzwa muna June 2017 mushure mokunge Kingsley amurova. Tichakupa kuparara.
Madzimamboley akamborayirirwa £ 4,390 nekuda kwekurwa kweSephora Goignan yakamusiya asingakwanisi kushanda kwemazuva masere. Kusangana, paakabvunzwa, akadaro akashatirwa nechekare mushure mokunge aimbova shamwari yake akatumira chinyorwa pamashoko ake e Instagram asina mvumo. Panzvimbo yekuenda kunodzidziswa, akapedza mavhiki mumatare eFrance mushure mekunge apomera mhosva yekumanikidza kumhuri. Wenzi waro akagamuchira zvimhosva asi akaramba kuratidza chirevo chekubuda kwekambani yake. Kuzosvika gare gare kwakarangwa neBayern Munich nokuda kwekurwa kwaakazozvidemba.
Kingsley Coman Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Zvimwe Zvako
Kingsley Coman ane zvinotevera zvinoratidza hupenyu hwake.
Kingsley Coman's Strengths: Kugadziriswa, kukwanisa kudzidza nokukurumidza uye kugovana pfungwa. Kingsley Coman ndiro zita rakafanana nekukurumidza sezvinoonekwa pasi apa.
Matambudziko aMarleyley Coman: Dzimwe nguva anotya uye zvinogona kutungamirira kumhirizhonga mumba. Kunyanya zvakadaro, aigona kunge asingabvumirani uye asingakanganisi.
Chii Kingsley Coman anoda: Kuita mafambidzani madiki kumativi ose eguta, kuridza mimhanzi, kuverenga mabhuku ose emagazini, nekukurukura neshamwari dzepedyo chete.
Chii Kingsley Coman haafariri: Kuva wega, kuvharirwa, kudzokorora mabasa asingazivikanwi okudzidzira mabasa uye nguva dzose.
Mukupfupisa, Coman inomiririra hukama huviri hwakasiyana umo huchazomboziva kuti chii chauchasangana nacho. Aigona kuita sangano, kutaura uye akagadzirira kunakidzwa. Kusangana kunogona kuitika zvakanyanya pane dzimwe nguva iwe usingatarisiri. Vakawanda vakati shamwari yake Renato Sanchez inomunzwisisa.
Kingsley Coman Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Tsvudzi Dzakatuka
Kingsley Coman akambova neusiku husiku - zvose pamunda uye pamusoro wake. Mutambo wacho wakatanga apo mutungamiri wechiFrench aive achiita basa reGudesdesga muGurban League semi-final yekutanga neAtletico Madrid, neAtletico yakakunda kuvonga zvikanganiso zvake.
Asi kunze kwechinangwa chinoshamisa chakatarisana neboka rake, chimwe chinhu chakabatwa neziso revafudzi vachitarisa mutsva pamba: Yaiva bvudzi raKunani risina musoro rinoratidzwa pasi apa.
Chaizvoizvo, sezvaunogona kuona kubva pamufananidzo uri pamusoro, Coman yakasarudza kutamba pamberi pezviuru zvevaridzi uye mamiriyoni evanhu vanoona rat's muswe mvere kurutivi rwomusoro wake. Mushure mokurasikirwa nemutambo, vatevedzeri vakatora kukanganisa kwebvudzi rake. Muenzaniso we tweets unowanikwa pasi apa.
Zviri pachena kuti, sezvaunogona kufungidzira, vatevedzeri vakakurumidza kuona bvudzi uye vakanga vasina kunaka kusakanganwira mukuzvidza mhosva yekurasikirwa kwavo. Pasinei nekurwiswa kwebvudzi rake, Kingsley haana kumbobvumirana neshoko rake. Mvere dzacho dzakaramba dzichiripo panguva yekunyora.
Kingsley Coman Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -satyisa
Kuungana hakuna kunyara kuratidza maonero ake. Pakurondedzera nguva yake achitamba pamwe neZlatan Ibrahimovic pa PSG, Coman vakati nezveSwede: "Ukama hwangu ne Ibrahimovic yakanga isingatsigiri zvachose. Haasi mukana wemutambi kuswedera kune vaduku vatambi uye ovapa mazano. Anongozvifungira oga. "
Zvisinei, Coman ine zvinyorwa zvinokurudzira Pep Guardiola: "Iye ndiye mudzidzisi akakurumbira munyika, mumaonero angu. Ini ndakabudirira zvakanaka pasi pePep, ini got a mugove of match tsika uye iye akaratidza kutenda kukuru mukati mangu. "
Kingsley Coman Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Costa Partnership
Coman naDouglas Costa vakabatana pamwe chete nekubudirira sezvo vakasangana pa FC Bayern Munich. Nekukuvadzwa Arjen Robben uye Franck Ribery Kuramba kweAllianz Arena vakatendeka maziso e'Kubvambura 'muzere-mhanya, maitiro eCosta neComan pamapapiro akakurumidza kuona vaBayern vatsva dub vavo 'CoCo Analysis'.
Kingsley Coman Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Football Personality
Kazhinji anoonekwa somumwe wevatambi vaduku vanonyanya kuvimbiswa vezera rake, Coman ishizha rinokurumidza, rine ruzivo uye rune nyanzvi, rine unyanzvi hwakanaka hwekudambisa, maonero, kufamba uye kunyange kukurumidza. Kingsley anokwanisa kutamba pane ari panhivi kana kunyange pakati, semunhu anenge ari kunyadzisa kana semuvengi.
Kunyangwe iwe iwe uri munhu wakarurama, tsoka yake ndiyo iri kuruboshwe, iyo inomubvumira kurova vaipikisa mune imwe mamiriro ezvinhu, kudonhedzwa kusvika pakati pegumbo rake rokurudyi, uye kana kupfura pachinangwa, kuumba mikana yevamwe vatambi, kana kuti ita kuti kurwisa kunopinda munzvimbo yacho. Mugore re 2015, Don Balón anonzi Coman mumwe weVCNUMX vaduku vaduku vaduku munyika
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai kuburikidza nekuverenga our Kingsley Coman Childhood Indaba pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Hansi-Dieter Flick Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Juan Bernat Uhuhuro Nhau Plus Untold Biography Facts
Javi Martinez Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Niklas Sule Childhood Story Uyezve Untold Biography Facts
Alvaro Morata Utano Nhau Plus Untold Biography Facts